ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: အသက်လေးရယ်တဲ့ ရှည်စေလို
ရေးပြီးချိန်: 12/13/2008 04:09:00 AM
ဟွန်းးး စိတ်က ဘလော့ဂ်ဆီမှာမှ မရှိတာကိုး.. ဒါဖြင့်လည်း သူများတွေလို လွမ်းကြောင်း ဆွေးကြောင်းပဲ ရေးပါတော့လားလို့ (အန်တီ့လိုလေ..:) )
game site လေးတွေ မှတ်သွားတယ် ညီမလေး။
Just wishing you Happy New Year and all the best! So What! :-)
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲတော့ ဘာဖြစ်သေးလဲ (နာမည်ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ထဲ့ပေးကြည့်တာပါ။း-)
အန်တီငြိမ်း... မတွေ့တာ ကြာပြီ။ လွမ်းလှပေါ့။ :D
ရေးချင်ပေမယ့်လည်း ပျင်းနေတယ်။ :)
မအလင်းညီ၊ ကိုပေါ... ကျေးဇူးပါဗျို့။